"Misiona tsy mampino" ny fahatongavan'ilay puce M1 amin'ny iPad Pro | Vaovao IPhone
Iray amin'ireo fitaovana natolotry ny omaly tolak'i Apple ny iPad Pro vaovao. Ity maodely iPad vaovao ity dia manampy ankoatran'ny zavatra hafa ilay puce vaovao natsangana tao anaty Mac, ny M1. Amin'io lafiny io, ny iPad dia hahazo herinaratra manta na dia fitaovana matanjaka be aza ao amin'ireo kinova taloha.
Ny famelabelaran-kevitra nataon'i Apple omaly dia nampiseho horonantsary iray izay tian'izy ireo hanahaka ilay seho malaza amin'ny sarimihetsika Mission Impossible, sehatra iray ahantona amin'ny tady ilay mpihetsiketsika ary amin'ity tranga ity dia azony raiso ny puce M1 amin'ny Mac hametrahana azy ao amin'ny iPad Pro vaovao.
Manontany tena ihany koa ny fotoana hidirany ao amin'ny Apple Park amin'ny fampiasana Apple Pencil handefasana vera sy hidirana amin'ny campus. Fa ity horonantsary mitondra ny lohateny «Incredible Mission» Tena soso-kevitra tokoa izahay ka zaranay aminao sao sendra diso ianao:
Ny fahatongavan'ity hatsikana ity izay hidirako ao amin'ny iPad Pro dia mety ho eo alohan'ny sy aorian'ny fitaovana ary mpampiasa maro no miandry ny fampisehoana an'ity iPad Pro ity. Ny fanampiana ny marika "Pro" amin'ny iPad dia midika zavatra betsaka amin'ny mpampiasa sy ny orinasa mihitsy noho izany dia zava-dehibe ny fanatsarana ny maodely teo aloha.
Amin'ity tranga ity dia mino an'izany izahay WWDC amin'ity taona ity dia hanana andraikitra lehibe amin'ity iPad Pro mahatalanjona ity natolotra ora vitsy lasa izay. Amin'ny famolavolana dia tsy nikitika na inona na inona izy ireo fa nanohina ny efijery amin'ilay maodely 12,9-inch ary nampiditra an'io puce mahery io tao anatin'ireo maodely roa ireo. Ho hitantsika fa hatraiza ny hery azo esorina amin'ny iPad Pro vaovao.
Etsy ankilany koa Avelanay eto ny fanambarana hafa momba ny maodely iPad Pro vaovao:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » «Misiona tsy mampino» ny fahatongavan'ilay puce M1 amin'ny iPad Pro
Ny Siri Remote vaovao dia mifanaraka amin'ny Apple TV andiany faha-5